Khadiijo Maxamed Diiriye Oo ka jawaabtay Oraahdii “Halkaan kufsigu waa iska caadi” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta xuquuqul insaanka, Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa jawaabtay warbixin ay dhawaan soo saartay hay’adda xaquuqda aadanaha ee “Human Rights Watch” oo ay ku sheegtay in kufsigu dumarka Soomaaliyeed loo geysto uu caadi ka yahay dalka.
Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheetay inaysan suuragal ahayn in kufsiga uu dalka caadi ka noqda, maadaama shacabka Soomaaliyeed aya yihiin muslimiin ah oo aan marnaba ka suurta geleynin waxyaabaha ay Hay’adda soo saartay.
Khadiijo oo ka hadashay warbixinta hay’adda ee xustay in bishii 8-aad dalka lagu kufsaday 27 haween Soomaaliyeed, ayaa sheegtay in warbixintaasi ay tahay mid xaqiiqda ka fog, islamarkaana hay’addu ay ka been sheegeyso tirada haweenka ee dalka dhibaatada loogu geystay.
Wasiirka Haweenka iyo horumarinta xaquuqul insaanka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in Wasaaraddu ay u degsantahay qorshe howleed loogu talagalay horumarinta xaquuqda haweenka, islamarkaana ay Wasaaraddu dejineyso qorshe cad oo lagu hirgelinayo dhowridda xaquuqda haweenka meelkasta oo ay jogaan.
“Wasaaradda waxaa ka go’an dhowridda xaquuqul insaanka, anagoo la kaashanayna shacabka Soomaaliyeed waxaan hirgelin doonaa in aan sameyno sharuuc adag oo lagu dhowrayo xaquuqda dumarka Soomaaliyeed” ayay tiri Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye oo la hadlaysay RM.
Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqday in dowladdu ay ku caawiyaan ilaalinta xuquuqda aadanaha si looga gudbo xad gudubyada ka dhanka ah dhworida xuquuqda aadanaha ee soo gaara dumarka.
Dhawaan ayaa hay’adda u dooda xuquuqda Aadanaha ee Human Rights Watch waxey soo saartay warbixin sheegeysa in kufsigu caadi ka yahay magaalada Muqdisho iyo deegaandada ku hareereysan.